हिमाल खबरपत्रिका | साहित्यमा मधेशको संवेदना
मैथिली उपन्यास सङोर ले मधेश आन्दोलनपछि आम मधेशीमा बढेको आत्मविश्वास, उपलब्धि र त्योसँगै झ्ाङ्गिएका विकृतिलाई मिहिन रूपमा केलाएको छ। रञ्जनले 'सर्च फर कमन ग्राउण्ड' र 'नयाँ संसार' नामक संस्थाले गरेका अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा यो कृति तयार पारेका हुन्। नेपाली भाषाको लू भने विशुद्ध साहित्यिक अभ्यासको क्रममा आएको कृति हो, जसमा लेखकले आफ्नो जन्मथलो नेपालगञ्ज क्षेत्रका सीमान्त मधेशीहरूका भावना पस्केका छन्। केन्द्रीय विषय राजनीति हुनु दुवै उपन्यासको समानता हो।
पहाड मसितै यात्रा गर्छ
लेखकः हेमन यात्री
मूल्यः रु.१९९, पृष्ठः ८३+१४
भिजिदिन्छ किनारा लागेको परेली
भरिएर आउँछ थकाइको सुनामी
बगरजस्तो सुकेको ओठबाट
डुब्यौ खै कुन सागरमा गएर?
इटहरीमा बसेर साहित्यकर्म गरिरहेका हेमन यात्रीको पहाड मसितै यात्रा गर्छ कविता संग्रहको 'बाटामा भरिया बालक' शीर्षकको पहिलो कविताको बालभरिया विद्यालयको सामान बोकेर पहाडतिर उक्लिंदैछ। कविताको अन्त्यमा कवि भन्छन्:
ए स्वयम्भूले चिहाएको शीतलनिवास!
केही गरी यो बालक
३९ थान गद्य कविता संग्रहित पहिलो कृतिबाटै यात्रीले एउटा शक्तिशाली उदयको उद्घोष गरेका छन्। छरिता आकारका सबै कवितामा शब्दहरूलाई शक्तिशाली संकेतको माध्यम बनाएका कविले पहाड, नदी, वनपाखा र दारुण ग्रामीण परिवेशबाट टिपेका बिम्ब, प्रतीक, मिथक, श्रुतिपरम्परा, गाथा तथा अभिव्यक्तिका अन्य उपकरणहरूको सुन्दर प्रयोग गरेका छन्। कवितामा रूख चढेकी आमा गीतका हरफहरू खसाल्छिन्। हिउँदे बतासको लैबरीमा चिउरीका पातहरू थपडी मार्छन्। हलेसोहरू कोरस गाउँछन्। लय र तालले सुसज्जित हरेक कविता भावले भिजेका छन्।
'बाँसुरी' कविता एकल जातीय प्रभुत्ववादी सत्तालाई आदिवासी हुनुको चेतले गरेको शालीन ललकार बनेको छ। घर छेउछाउ लुकिबसेका एकान्तहरू टिपेका कविले सुकेको लेउजस्तो मन र अंशमा परेको नागरिकताको गहिरो अनुभूति गराउँछन्, पाठकलाई। कवितामा शब्दहरू कविका विषयलाई स्मरणीय बनाउन जुटेका छन्। हेमन यात्रीलाई एक सशक्त युवा कविमा दर्ता गर्न सक्षम यो संग्रह निःसन्देह पठनीय र संग्रहणीय छ।
लेखकः जीवनप्रसाद राई
प्रकाशकः जिपा फाउण्डेसन
मानिस आर्थिक प्राणी हो। हरेक मानिस हर दिन कुनै न कुनै काम गरेर केही न केही रुपैयाँ कमाइरहेको हुन्छ। केही व्यक्ति त्यही 'केही' रुपैयाँको योगबाट करोडपति बन्छन् भने धेरैजसो जति संघर्ष गरे पनि जीवन कंगाल बनेको दुःखेसो गरिरहन्छन्। जबकि, सबैले सम्पत्ति कमाउने समान अधिकार र समय (२४ घण्टा) पाएका हुन्छन्। यसमा गडबड केले पारिरहेको छ त?
नेपालको स्वतन्त्र कृषि अध्ययन र लेखनमा लागेका जीवनप्रसाद राईका अनुसार, यसमा समय र पैसाको व्यवस्थापनले असर पारिरहेको हुन्छ। अर्थात्, २४ घण्टा समय र त्यस अवधिको आर्जनलाई व्यवस्थित हिसाबले अगाडि बढाउने हो भने सबै करोडपति नभए पनि कोही कंगाल रहँदैनन्, देश उँभो लाग्छ। लेखकले यो सरल मन्त्रलाई आफ्नो नवौं कृति सम्पत्ति विज्ञान मा समेटेका छन्। आवरण हेर्दा फ्लोरेन्स लिट्टौएरको पर्सानालिटी प्लस वा स्वेट मर्डनको धन कुवेर कैसे बनें कोटिको लाग्ने किताबले सम्पत्ति आर्जनबारे धेरै व्यावहारिक विश्लेषण गरेको छ।
सरल भाषाको ५७ वटा आलेखमा रातारात धनी बन्ने विद्या हैन पैसाप्रतिको धारणा, पैसाको संजाल, व्यक्तिगत/संस्थागत लेनदेन र प्रहरी/गुण्डा/नेता प्रयोगदेखि पैसासँग जोडिने प्रेरणा तथा ब्याङ्किङ बचतसम्मको वर्णन छ। किताबले उदाहरणलाई व्याख्याको आधार बनाएको छ। नेपाली उद्यमशीलताका लागि यो किताब भिटामिन चक्की बन्ने देखिन्छ।
पुस्तकः दिशाहीन यात्रा
लेखकः सूर्य सुवेदी
प्रकाशकः साबला प्रकाशनका लागि
धनकुटाको एउटा गाउँबाट क्याम्पस पढ्न आएको शिक्षकको छोरोलाई प्रमुख पात्र बनाएर सूर्य सुवेदीले लेखेको उपन्यास दिशाहीन यात्रा ले २०४६ पछिको परिवर्तन, त्यसबेलाका राजनीतिक दलहरूको अराजकता, कुशासन, माओवादीको हिंसा र त्यसबाट पीडित नेपालीहरूका कथाबारे सविस्तार वर्णन गरेको छ। यद्यपि, उपन्यास भनिए पनि औपन्यासिक लालित्यको हिसाबले कमजोर र नेकपा माओवादीको हिंसात्मक 'जनयुद्ध' को सतही विश्लेषण जस्तो मात्र लाग्छ। पात्रहरूको प्रेम र अभिसारको वर्णनमा लेखक असफल छन्। उपन्यासमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सुशासन दिन नसकेको टिप्पणी पट्यारलाग्दो गरी दोहोरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि २०४६–६३ को नेपालको राजनीतिक–सामाजिक अवस्थाको वर्णनका साथै माओवादी हिंसाबाट सिर्जित पीडाका कथा साहसपूर्वक भन्न सक्नु लेखकको विशेषता मान्नुपर्छ। माओवादीले देशमा मच्चाएको हिंसा दिशाहीन यात्रा मात्रै थियो भन्ने कुरा पनि उपन्यासले पुष्टि गरेको छ।